दुई दर्जनभन्दा बढीले प्रदेश २ बाट एमालेमा उम्मेदवारी दिने, को-को भिड्दैछन् ? - Khabar Center
दुई दर्जनभन्दा बढीले प्रदेश २ बाट एमालेमा उम्मेदवारी दिने, को-को भिड्दैछन् ?
नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा प्रदेश २ बाट दुई दर्जनभन्दा बढी नेताहरु उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। महाधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। तर प्रदेश २ का नेताहरु खुलेर महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारीबारे बोल्न चाहिरहेका छैनन्।
माधव नेपाल समूह एमालेबाट अलग्गिएर नयाँ दल खोलेपछि एमालेमा बढी गुट उपगुट देखिएको छैन। एमालेको महाधिवेशनमा माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुसमेत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्रको रुपमा रहेका छन्।
एमालेको महाधिवेशनमा प्रदेश २ बाट दुई नाम बढी चर्चामा रहेको छ। माओवादी केन्द्र छाडेका प्रभु साह र एमालेमै रहेर राजनीति गर्दै आएका रघुवीर महासेठको नाम अहिले चर्चामा छ। दुवैजना एमालेको सचिव पदमा भिड्ने योजनामा छन्। दुवै नेता ओली निकट हुन्। साह रौतहटका हुन् भने महासेठ धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।
प्रदेश २ बाट महासेठ र साह सचिव पदमै लड्ने भएपछि ओलीलाई दुईमध्ये एकलाई रोज्न समस्या हुने देखिएको बताइन्छ। महासेठले नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थिए। सुरुमा पार्टी राजनीतिमा खासै सक्रियता नदेखाएका उनको प्रभाव पछिल्लो समय एमालेमा बढ्दै गएको छ।
पछिल्लो एक दशकमा उनले सांसद हुँदै उपप्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा गरिसकेका छन्। बीआइटी कलेजबाट इन्जिनियरिङको अध्ययन गरेका महासेठ इलाममा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। महासेठले इलाममा एमालेको सचिव भएर काम गरिसकेको धनुषाका नेताहरु बताउँछन्। इलाममा रहँदा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग उनको सम्पर्क बढ्दै गएको थियो। पछि नेपालकै पैरवीमा महासेठ उदयपुर सिमेन्टका जीएम बनेका थिए।
जीएमबाट हटेपछि उनी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भए। तर उनी आफ्नो कित्ता परिवर्तन गर्दै वामदेव गौतमको विश्वास पात्रको रुपमा स्थापित भएको नेताहरु बताउँछन्। विसं २०५४ सालमा एमाले विभाजन हुँदा महासेठ मालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
सातौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका महासेठ आठौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमै पराजित भएका थिए। त्यस समयसम्म उनी ओलीको नजिकका भइसकेका थिए। एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा सचिव उम्मेदवार बनेका महासेठले जीत हासिल गर्न सकेनन्। उनी अहिले पुनः सचिव बन्न उम्मेदवार दिने तयारीमा लागेका छन्।
सचिव पदमै उम्मेदवारी दिन लागेका प्रभु साह भने केही महिनाअघि मात्र एमालेमा गएका हुन्। विसं २०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा उनले माओवादी केन्द्रबाट रौतहट क्षेत्र नं ३ मा चुनाव जितेका थिए। माओवादीको कारबाहीमा परेपछि उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका छन्।
प्रभु साह मधेसको राजनीतिमा चर्चित नाम हो। माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा साह सक्रिय थिए। मूलधारको राजनीतिमा आएपछि पार्टीमा उनको कद बढ्दै गएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भएपछि साह एमालेतर्फ लागेका हुन्। अहिले उनी ओलीको विश्वास पात्रको रुपमा चिनिन्छन्। सोहीअनुसार ओलीको सचिव पदमा उनले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको बुझिएको छ।
एमालेको सचिव पदबाहेक केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने नेताहरु पनि छन्। जुली महतो, सुमन प्याकुरेल, हरिनारायण महतो, उत्तम गौतम, टेकबहादुर बलमपाकी, सुवोध यादव, रामदयाल मण्डल, लीलानाथ श्रेष्ठ, राजनारायण साह, बलवीर चौधरी, प्रभु हजरा, रामचन्द्र मण्डल, बसरुद्दिन अन्सारीलगायतका नेताहरु केन्द्रीय सदस्यको लागि निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
एमालेको दसौं महाधिवेशनका लागि प्रदेश २ बाट २३२ जना प्रतिनिधि छानिएका छन्। प्रदेश २ का सचिव मनोज खडकाका अनुसार अहिले २३२ जना प्रतिनिधिमा छनोट भएको र पछि केही थपघट हुन सक्नेछ।
सचिव खडकाले दिएको जानकारीअनुसार धनुषाबाट ५३, महोत्तरीबाट ३२, सर्लाहीबाट १३, सिरहाबाट २२, सप्तरीबाट २०, रौतहटबाट २७, बाराबाट ३८ र पर्साबाट २७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएका छन्। प्रदेश कमिटीबाट ५ जना मनोनीत भएका छन् भने मजदुरबाट ७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ।
प्रकाशित मिति :मंसिर ९ २०७८ बिहिवार - १३:४४:५३ बजे